पाणिनी ऋषि,भगवान बुद्ध र फाल्गुनन्दका सन्तान हौँ,हामीमा उनीहरुकै रगत बगेको छ :गगन थापा « Pana Khabar
पाणिनी ऋषि,भगवान बुद्ध र फाल्गुनन्दका सन्तान हौँ,हामीमा उनीहरुकै रगत बगेको छ :गगन थापा
समय : 12:44 am
“म बन्छु जिम्मेवार : कर्तब्यसंगै अधिकार” भन्ने अभियानमा नयाँ बर्ष २०७५ को शुभकामना ब्यक्त गर्दै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा वर्तमान सांसद गगन थापाले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको उपस्थितिमा नयाँ बर्ष मनाउन पाउनु जस्तो सुखद अर्को बिहानी हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
हामीले अघिल्लो बर्ष यो देशमा चुनाव होस् भन्ने कामना गर्यों, त्यो भन्दा अघिल्लो बर्ष संबिधान आवोस भन्ने कामना गर्यौं र त्यो भन्दा पनि अघिल्लो बर्ष यो देशमा शान्ति छावोस भन्ने कामना गर्यौं । तर यो बर्ष हामी ती कुनै पनि कामना गर्दैनौ । किनकि ती सबै कुराहरु प्राप्त भएका छन् । अब हामीले नयाँ अनि सकारात्मक सोंचका साथ् अघि बढ्नु छ । अब हाम्रो एउटामात्र मुद्धा छ – त्यो हो समुन्नतिको मुद्धा । म समृद्धि भन्दिन । समुन्नती अर्थात् प्रत्येक नेपालीको उन्नति, अर्थात् प्रत्येक क्षेत्रमा उन्नति , समुन्नती अर्थात् हामी सबैको एकैपटक उन्नति । यो नै अब हाम्रो नेपालको एजेन्डा हो , नि:संदेश यसमा सबैभन्दा नेपाल सरकारको भूमिका हुन्छ । नेपाल सरकार भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी मात्रै हैन हामी पनि त्यसको अंग हौँ । यहाँ वडा अध्यक्ष ज्युहरु हुनुहुन्छ, यहाँ माननीय ज्युहरु हुनुहुन्छ, हामी सबै सरकारसंग जोडिएका छौं । हामीसंग थुप्रै अपेक्षाहरु पनि छन् र हाम्रा जिम्मेवारीहरु पनि छन्. यो ठिक कुरा हो । के सरकारको पहलबाट मात्रै र सरकारको सहयोगबाट मात्रै समुन्नती प्राप्त हुन्छ ? हुँदैन ।
सिंगो समाजको, समुदायको प्रत्येक व्यक्तिको संलग्नता चाहिएको छ त्यही संलग्नताको उद्ध्येश्यका साथ आज हामीले यो अभियान शताब्दी पुरुषको समुपस्थितिमा हामीले “म बन्छ जिम्मेवार: कर्तब्यसंगै अधिकार” को शुभारम्भ गरेका छौं । यो अभियानसंग जोडिएका केही विषयहरु छन् । राजनीतिक सभ्यतामा हामीले पूर्वीय वा पश्चिमी भनेर जुन जुन भूभागलाई चिनेको भए तापनि यसको स्वरूप भन्ने ठ्याक्कै फरक छ । विश्वको राजनीतिमा हामीले हेर्यौं भने पनि अहम र अहंकार भेट्छौं । पश्चिमी समाजले जति पनि नायक भनेर स्वीकारेको छ राजनीतिक शक्तिलाई शक्तिको श्रेष्ट स्वरूप मान्ने पश्चिमबाटै प्राप्त भएको हो । हामी कहिले काही पश्चिमजस्तो हुन् नपाएकोमा इर्ष्या गर्छौं । तर एक पटक पश्चिमको इतिहासलाई हामीले राम्रो संग नियालेर हेर्यो भने त्यो शक्तिको प्रयोग र त्यो शक्तिको रुप लोभ, लालच र वासनाले गर्दा त्यहाँका मानिसहरु सताब्दियौंसम्म दु:ख पाएका छन्, हण्डर पाएका छन सायदै हाम्रा पिता पूर्खाले पाएका होलान । बाँच्न का लागि अधिकारको चिन्तन हाम्रो भन्दा पनि पश्चिमाहरुका लागि एउटा मौलिक चिन्तन थियो ।
इतिहासमा चक्रवर्ती राजाहरूभन्दा पनि महर्षिहरु धेरै पुजनीय छन्, चर्चित छन् । यसो हुनुको पछाडी हाम्रो अन्तर्मुखी चित्त रहेको छ किनकि हामी अन्तर्मनको कुरा बढी गर्ने गर्छौं । पश्चिमाहरू अधिकार हैन ड्युटी भन्छन जसलाई हामी धर्म भन्न रुचाउछौँ । हाम्रा निम्ति कर्तव्यको कुरा श्रेष्ठ थियो, छ र रहनेछ ।
हामी पाणिनी जस्ता ऋषि र भगवान बुद्धका सन्तान हौँ । हामी भगवान फल्गुनान्द्का सन्तान हौँ । हामीमा उनीहरुकै रगत बगेको छ । आधारभूत रुपमा हामी जे जस्तो देखिए तापनि हामी अन्तर्मुखी मानिस हौँ. यो विदोधाभाशालाई बदल्न खोजेर, यसलाई बदल्न खोजेर हामी जसलाई आधुनिकता भन्छौँ त्यसका आधारमा हामीले आफ्नो सोंचलाई निर्धारण गरेर समाजलाई बदल्ने प्रयास गरायौं भने समाज बदलिँदो रहेनछ।
देशमा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि भएको छ, अधिकार हामीले पाएका छौं. तर हाम्रो सामाजिक र ब्यबहरिकतामा कही न कही त्यो रिक्तता देखिन्छ ।रिक्तता देखिनु भनेको हामी कर्तव्यको परम्पराबाट बिमुख हुँदै आउनु हो ।हामीले अधिकार मागिरहेका छौं तर कर्तब्य बिर्सीरहेका छौं । हामी हाम्रो जराबाट बिमुख भैरहेका छौं । हामी पुन: त्यही जरामा फर्किनु पर्दछ । संस्कारको कुरा गर्दा धेरै पर पनि पुग्नु पर्दैन, प्रताप मल्लले बनाएको रानी पोखरी हेरे पुग्छ । काठमाडौँ, मिथिलान्चालको जात्र र परम्परा हेरे हुन्छ । हाम्रा पितापूर्खाले बनाएको कुरालाई हामीले जोगाउनु पर्छ ।
पुष्पलाल, विपी कोइरला देखी यहाँसम्म आइपुग्दा छ दशक लडाइमा बित्यो । त्यो लडाइमा समय बित्दै गर्दा हामीसंग बहाना पनि थियो, कारण पनि थियो तर अब राजनीतिक लडाई सकिएको छ, अब हामीलाई कर्तव्यको नयाँ परम्परा चाहिएको छ । कर्तव्यको संकल्पमा जोडिन आज हामीले एउटा नयाँ अभियान थाल्यौं तर कर्तब्य कसले गर्ने ? कसले गराउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । हाम्रो धर्मले कर्तब्य बिनाको अधिकारलाई मान्दैन । त्यसैले जसले धर्म मान्दछ उसले कर्तव्यलाई पनि संगसंगै स्वीकार गर्नुपर्दछ ।मेरो आग्रह छ २०७५ साललाई कर्तव्यको बर्ष बनाउँ ।यो अभियान अन्तर्गत हामीले बर्ष भरिमा १२ वटा कार्यक्रम गर्ने छौं ।
नयाँ शुरु गरिएको अभियानको बारेमा गगन थापाको समग्र विचारसँग परिचित हुन यो भिडियो हेर्नुहोस